Kitapo fanaterana sakafo
Potiet Mat Maty
Kitapo tote fampiroboroboana misy loko maro
Volom-borona volom-borona polyester amin'ny lamba tsy misy rano ...
Kitapo mangatsiaka vita amin'ny lamba vita amin'ny Oxford vita amin'ny porta ...
Fanaterana sakafo mafana voaroaka polyester sy reusab ...
Polyester kitapo avo roa heny Kitapo mangatsiaka kokoa
Kitapo mitondra casserole polyester extensible miaraka amin'ny lamaody ...
Kitapo fanamboarana tarehy vita amin'ny hoditra vita amin'ny kitapo ho an'ny kitapo vehivavy kosmetika
Ity akanjon'ny kitapo makiazy ity dia vita amin'ny lamba vita amin'ny hoditra avo lenta, malefaka sy mahazo aina, mahatohitra ny loto sy ny makotraka, mora diovina. Mavesatra maivana, mateza be ary maivana tokoa. Kitapo tena ilaina sy matevina io, fahaiza-manao lehibe. Mihazona be dia be, ary afaka mihantona amin'ny toerana rehetra. Kitapo harona zipper anatiny, afaka mahazaka sarontava tarehy, pensilihazo amin'ny volomaso ary zavatra hafa. Tongasoa namboarina ihany koa. Manana efitrano fakan-tahaka matanjaka be izahay. Alefaso amiko ny sangananao, hiverina ny santionany ...
Kitapo makiazy mahafatifaty mahafatifaty miaraka amin'ny tahony bitika kely
Ity akanjon'ny makiazy ity dia vita amin'ny lamba oxford avo lenta, malefaka sy ahazoana aina, mahatohitra ny loto sy ny abrasion, mora diovina. Mavesatra maivana, mateza be ary maivana tokoa. io no ho fitetezana anao sy mpiara-dia aminao azo antoka mandritra ny fotoana maharitra. Kitapom-batsy misy fidiovana lehibe habe: 9.4 ″ x 5.1 ″ x 6.3 ″, manana toerana malalaka handehanana mandritra ny andro lava na trano fidiovana fialan-tsasatry ny mpianakavy toy ny shampoo, gel mandena, paty nify, borosy nify, makiazy, kojakoja fanaratra, lamba famaohana sns, mak .. .
Kitapo makiazy kely mahafatifaty ho an'ny kitapo kosmetika kitapom-batsy Mini Travel
Ny kitapo kosmetika dia vita amin'ny hoditra PU avo lenta. Izy io dia tsy tantera-drano, tsy mahazaka, maharitra ary manana fanidiana zip mahery mba hiantohana ny fiarovana ny entanao ao anatiny. Kitapo tena ilaina sy matevina io, fahaiza-manao lehibe. Mihazona be dia be, ary afaka mihantona amin'ny toerana isan-karazany, mety tsara amin'ny fampiasana isan'andro na fitsangatsanganana. Mety ho fanomezana lehibe ho an'ny vehivavy sy ny zazavavy izany. Tongasoa namboarina ihany koa. Manana efitrano fakan-tahaka matanjaka be izahay. Alefaso amiko ny kantoo, hiverina aminao ny santionany. Item No. .: ML17811 S ...
2020 Kitapo makiazy vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vaovao
Ity akanjon'ny harona makiazy ity dia vita amin'ny lamba vita amin'ny hoditra vita amin'ny varotra avo lenta, malefaka sy ahazoana aina, mahatohitra ny loto sy ny hadiry, mora diovina. Mavesatra maivana, mateza be ary maivana tokoa. Kitapo tena ilaina sy matevina io, fahaiza-manao lehibe. Mihazona be dia be, ary afaka mihantona amin'ny toerana isan-karazany, mety tsara amin'ny fampiasana isan'andro na fitsangatsanganana. Mety ho fanomezana lehibe ho an'ny vehivavy sy ny zazavavy izany. Tongasoa namboarina ihany koa. Manana efitrano fakan-tahaka matanjaka be izahay. Alefaso amiko ny kantoo, ny santionany dia ...
Kitapo kosmetika maivana miendrika kalitao Oxford Zipper
Ity akanjon'ny makiazy ity dia vita amin'ny lamba oxford avo lenta, malefaka sy ahazoana aina, mahatohitra ny loto sy ny abrasion, mora diovina. Mavesatra maivana, mateza be ary maivana tokoa. Kitapo tena ilaina sy matevina io, fahaiza-manao lehibe. Mihazona be dia be, ary afaka mihantona amin'ny toerana rehetra. Kitapo harona zipper anatiny, afaka mahazaka sarontava tarehy, pensilihazo amin'ny volomaso ary zavatra hafa. Tongasoa namboarina ihany koa. Manana efitrano fakan-tahaka matanjaka be izahay. Alefaso amiko ny sangananao, hiverina ny santionany ...
Kanto vita amin'ny landihazo vita amin'ny landihazo vita amin'ny kitapom-batsy vita amin'ny paosety makiazy
Ity kitapo ity dia vita amin'ny lamba canvas, malefaka sy ahazoana aina, mahatohitra ny loto sy ny hadalana, mora diovina. Mavesatra maivana, mateza be ary maivana tokoa. ireo harona ireo dia refesina eo ho eo. 8,2 x 5,3 x 4,3 santimetatra, fahafaha-manao lehibe handraisana ny zavatra ilainao isan'andro ary hitondra anao hanam-potoana, azonao atao ihany koa ny mitondra azy rehefa mivezivezy, miantsena, mitoby ary maro hafa, mora entina sy ampiasaina. Azonao atao ny mametraka ny telefaoninao, carte de crédit, coin, vola sy entana madinidinika ao anaty kitaponao hanampiana anao handamina ny fanananao sy hitahirizanao ...
Ity kitapo tote ity dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 12L, afaka mitazona boky, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Paosy anoloana ho an'ny zavatra madinidinika. Mety aminao ny mamoaka zavatra. Isan-taona dia manome modely vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Tongasoa namboarina ihany koa. W ...
Ity kitapo tote ity dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 11L, afaka mitazona boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Paosy harato sy paosy anoloana ho an'ny zavatra madinidinika. Mety aminao ny mamoaka zavatra. Isan-taona dia manome modely vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Volavola namboarina dia ...
Ity kitapo tote ity dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 13L, afaka mitazona boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Kitapo harato ho an'ny zavatra kely sasany. Mety aminao ny mamoaka zavatra. Isan-taona dia manome modely vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Tongasoa namboarina ihany koa. Isika ...
Kitapo laptop fampiroboroboana misy loko maro
Ny kitapo laptop tsy tantera-drano dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara na dia amin'ny andro orana aza. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 11L, afaka mitazona laptop 14 inch, boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, asa ary fialamboly. Ny fehikibo azo ampiasaina amin'ny soroka dia afaka mampihena ny havizanan'ny soroka hahatonga anao hahazo aina. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Paosy harato sy paosy anoloana ho an'ny zavatra madinidinika. Izy io dia conve ...
Kitapo kitapo fampiroboroboana kitapo misy loko maro
Fampiroboroboana kitapo kitapo ho an'ny fanomezana dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara na dia amin'ny andro orana aza. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 15L, afaka mitazona laptop 14 inch, boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Ny fehin-tsoroka malemy amin'ity kitapom-batsy ity dia afaka mampihena ny havizanan'ny soroka mampitony anao. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Paosin'ny harato ho an'ny rano tavoahangy sy paosy paosy ...
Fampiroboroboana kitapo mangatsiaka tavoahangy roa
Ity kitapo mangatsiaka fampiroboroboana ity dia ho an'ny tavoahangy divay 2, zava-pisotro hafa na sakafo. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny sarony dia mety ho PEVA fotsy, PEVA volondavenona na foil volafotsy izay azo antoka amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Azo soratana eo am-paosy aloha ny sary famantarana anao. Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE matevina 3mm eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisoratana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa iray matevina kokoa ianao. Isan-taona dia manome lamina vaovao 50-100 ho an'ny rehetra ...